phambi kolwandle - ikhowudi citra 008031-LT-0063
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGabriella
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uGabriella iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndlu ikwi-villa ye-Art Nouveau ejongene nolwandle. Inegumbi lokuhlala elinebhedi yesofa kunye nekhitshi, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela eline-tub, i-terrace, igadi kunye nendawo yokupaka ekwabelwana ngayo.
Ukusuka kwi-terrace unokonwabela umbono ongaqhelekanga wolwandle. Indawo yokuhlala ilungele ulwandle kunye neevenkile, kungekude kwindlela yebhayisekile eqala eSan Lorenzo kwaye ifike e-Ospedaletti. Malunga neemitha ezingama-300 kukho imivalo, iindawo zokutyela kunye neeklabhu. Indlela yokuphuma ye-Imperia Ovest imalunga neemitha ezingama-500.
Indawo efanelekileyo yohambo kwihinterland kunye nezinye ezidumileyo zeRiviera (Diano Marina, Alassio, Sanremo, Cote d'Azur)
Le ndlu iphambi kolwandle kwaye ilungele zonke iinkonzo: indawo yokumisa ibhasi kwiimitha ezingama-50, ukuphuma kwemoto kwiimitha ezingama-500, ivenkile enkulu kwiimitha ezingama-200, elunxwemeni lweemitha ezingama-300, imivalo, iindawo zokutyela kunye neepizzeria kwiimitha ezingama-300. Indlela yomjikelo imalunga ne-2 km kude, iziko li-1500 yeemitha. Indawo egqwesileyo yohambo lokuya eCôte d'Azur, indawo entle yaseLigurian, ezinye iidolophu ezintle zeRiviera dei Fiori.
Ndiya kufumaneka kwiindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo ukuze ndibanike uncedo kunye nolwazi